News Archives - Page 26 of 41 - Popular
မွန်ပြည်နယ်တွင် စံပြသဘင် မိသားစု တည်ထားကိုးကွယ်တဲ့ ‘အေးချမ်းသာယာ ပင်လုံစေတီတော်’
''ဘုရားတည်ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ကလည်း ထူးခြားတယ်။အဖေက လွန်ခဲ့သော ၁ဝနှစ်လောက်က ဘုရား တည်မယ်ဆိုပြီးဘုန်းဘုန်းတစ်ပါးနဲ့အဓိဌာန်ပြုခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သူ မတည်ဖြစ်လိုက်ဘူး။အခု၁ဝနှစ်ကြာ တဲ့အခါကျမှအစ်မနဲ့အကြားအမြင် ဆရာမတစ်ယောက်နဲ့ပြောရင်းနဲ့ သူကနင်တို့အဖေကတိပေးထား တာ ရှိတယ်။ အဲဒါဟုတ်သလား လို့ မေး တယ်။ အဖေကို့မေးတဲ့အခါကြ…
သံချပ်တွေကို တစ်ကမ္ဘာလုံးပျံ့စေချင်တဲ့ ဦးမေတ္တာ
ကျွန်တော်က သံချပ်တွေကို ကမ္ဘာအထိ ပျံ့စေချင်တာ။ နိုဝင်ဘာလ၂၅ရက် နေ့ကနေ ဒီဇင်ဘာ၁ဝရက်အတွင်းမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးလုပ်ကြတဲ့အခါမှာ တို့မြန်မာ ပြည်လည်း လုပ်တယ်။ တို့လုပ်တဲ့ အလုပ်တွေဟာဒီလိုပါဟေ့ဆိုပြီး ကမ္ဘာကိုပြောတဲ့ အခါမှာ နည်းနည်းလေးမှ အဖြတ်အတောက်မခံချင်ဘူး . . .
သရုပ်ဆောင်နေထူးနိုင်နဲ့ အာခါလူမျိုးများ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထာတဲ့ ''အနေအေးတဲ့ မြွေပွေး'' ဗီဒီယိုဇာတ်ကားမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့က Central Hotel မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် . . .
အမျိုးသမီး အချင်းချင်းလည်း အကြမ်းဖက်မှုတွေရှိတယ် ပတ္တမြားကေခိုင်
အမျိုးသမီးတွေ အကြမ်းဖက်ခံနေ တယ်ဆိုတာ အမျိုးသားတွေကချည်းပဲ အကြမ်းဖက်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ အမျိုး သမီးအချင်းချင်းလည်း အကြမ်းဖက်တာ မျိုးတွေရှိတယ်။ ကိုယ်ခန္ဒာကို ထုရိုက်နှက်နေ တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲခြား ဆက်ဆံတာတွေ နိုင့်ထက် စီးနင်းလုပ်တာတွေ ဟာလည်း လူကို လူချင်း…
သင်းလုံးကျွတ် ညီလာခံမတိုင်မီ အကြိုဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်
ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် သင်းလုံး ကျွတ်ညီလာခံ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး တွင် အကြိုဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်နေပါတယ်လို့ .....
ရွှေဆံပင် ပညာဒါနကျောင်းတွင် ဝါးဖြင့်စာကြည့်တိုက်တစ်ဆောင် ဆောက်ရန် နယူးဇီလန်မှ ဝါးအထူးပြု ဒီဇိုင်နာတစ်ဦးဖြင့် သဘောတူထား
ယင်းမာပင် မြို့နယ်အတွင်းက ရွှေဆံပင် ပညာဒါနကျောင်းတွင် ဝါးအသုံးပြု စာကြည့်တိုက်တစ်ဆောင် တည်ဆောက်ရန်နယူးဇီလန်မှ ဝါးအထူးပြုဒီဇိုင်နာ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦး ဖြင့် သဘောတူထားကြောင်း ရွှေဆံ ပင် ဆရာတော်အရှင်ဝေပုလ္လထံမှ သိရသည် . . .
မြန်မာဗီဒီယိုဈေးကွက်မှာ လူပြောများ၊ ခေတ်စားနေတဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခွေ ၃၅ဝကျပ် နဲ့ရောင်းချမှုအပေါ် ကောင်းခြင်း၊ ဆိုးခြင်း ဘယ်လိုရှိလေမလဲ။ နောက်ပိုင်းမှာ.........
ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပမည့် မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအရုံး ရွေးကောက်ပွဲ
မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအရုံး(ဗဟို) အမှုဆောင်အဖွဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကို ယနေ့ နိုဝင်ဘာ ၂၃ရက်၊ မနက်ပိုင်းက တာမွေမြို့နယ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအရုံး(ဗဟို) တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအရုံး (ဗဟို) ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ကြေငြာချက် . . .
ဗီလိန်ပုံစံမျိုး သရုပ်ဆောင်ရလည်း ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ဆုပန်ထွာ
ဒီကာရိုက်တာကို ကိုယ်တိုင်က သဘောကျနှစ်ခြိုက်လို့ လက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဆုပန်ထွာက... ''အောင်မြင်ပြီးသား ဒီလိုဇာတ်လမ်းတွဲအတွက် မပန်ကိုလာကမ်းလှမ်းတာ။ အစ်မလည်း တအားဝမ်းသာပါတယ်။ Season2မှာ Season 1 က လူတွေ သိပ်မပါတော့ဘူး။ မပန်တို့ ပါလာတယ်ပေါ့။…
စာအုပ်ထုတ်ဝေသူ ရှိနေသရွေ့စာတွေ ရေးနေဦးမှာပါပဲဆိုတဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင် ဦးကျော်ထူးရဲ့ ၁၇အုပ်မြောက် စာအုပ်ထွက်ရှိ
ပရိသတ်တွေ ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစီမှာ ငြိသွားတာမျိုးတွေရှိမယ်။ ရင်ဘက်ထဲအထိ ရောက်သွားလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အထဲမှာ Message လေးတွေပါတယ်။ ပရိသတ်ကို ပေးထားတာလေးတွေပါတယ်။ အဲဒီ့အထဲက စာကြောင်းလေးတွေကို ထုတ်ယူသုံးမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်မိသားစု ကိုယ့်ဆွေမျိုး ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်းကို . . .
ဇာတိမြေဖြစ်တဲ့ ပဲခူးမှာ အလှူအတန်းကြီးကျွေးချင်တဲ့အကြောင်း မေကဗျာပြော 555 views